Jesu Anodzidzisa Nikodhimo Kuti ‘Kuberekwazve’ Kunorevei | Upenyu hwaJesu
JESU ANOTAURA NANIKODHIMO
Paari muJerusarema achichengeta Paseka ya30 C.E., Jesu anoita zviratidzo, nezvishamiso. Izvi zvinoita kuti vanhu vakawanda vatende maari. Nikodhimo, mumwe muFarisi uye nhengo yedare repamusoro rechiJudha rinonzi Sanihedhrini, anoshamiswa nezviri kuitwa naJesu. Saka achida kunzwa zvimwe zvakawanda, anoshanyira Jesu kwasviba. Pamwe ari kuenda usiku nokuti ari kutya kuti anozofungirwa zvisiri izvo nevamwe vake, vatungamiriri vechiJudha.
“Rabhi,” anodaro Nikodhimo, “tinoziva kuti imi somudzidzisi makabva kuna Mwari; nokuti hapana angagona kuita zviratidzo izvi zvamunoita kunze kwokunge Mwari ainaye.” Achimupindura, Jesu anoudza Nikodhimo kuti munhu anopinda muUmambo hwaMwari anofanira ‘kuberekwazve.’—Johani 3:2, 3.
Asi munhu angazvarwa sei patsva? “Angapinda mudumbu raamai vake kechipiri oberekwa here?” Nikodhimo anobvunza.—Johani 3:4.
Kwete, handizvo zvinoreva kuzvarwa patsva. Jesu anotsanangura kuti: “Kana munhu akasaberekwa nemvura nomudzimu, haangapindi muumambo hwaMwari.” (Johani 3:5) Jesu paakabhabhatidzwa, mudzimu mutsvene ukaburuka paari, ndipo paakazvarwa “nemvura nomudzimu.” Izvozvo pazvakaitika pakanzwikwa inzwi raibva kudenga richiti: “Uyu ndiye Mwanakomana wangu, anodiwa, wandafarira.” (Mateu 3:16, 17) Apa Mwari aitozivisa kuti akanga abereka Jesu semwanakomana wemudzimu aiva netariro yokuzopinda muUmambo hwekudenga. Gare gare, paPendekosti ya33 C.E., mudzimu mutsvene uchadururwa pane vamwe vanenge vabhabhatidzwa, saka vanenge vazvarwa patsva sevanakomana vaMwari vomudzimu.—Mabasa 2:1-4.
Zviri kuomera Nikodhimo kuti anzwisise zvaari kudzidziswa naJesu nezveUmambo. Saka Jesu anomuudza zvimwe nezvebasa rake rinokosha seMwanakomana waMwari. Jesu anoti: “Sokusimudza kwakaita Mosesi nyoka murenje, saizvozvo Mwanakomana womunhu anofanira kusimudzwa, kuti munhu wose anotenda maari ave noupenyu husingaperi.”—Johani 3:14, 15.
VaIsraeri ivavo vekare pavairumwa nenyoka dzaiva neuturu vaifanira kutarisa kunyoka yendarira kuti vapone. (Numeri 21:9) Saizvozvowo vanhu vose vanofanira kutenda muMwanakomana waMwari kuti vasafe, vawane upenyu husingaperi. Achitsanangura rudo rwakaratidzwa naJehovha pakuita urongwa uhwu, Jesu anoudza Nikodhimo kuti: “Nokuti Mwari akada nyika kwazvo zvokuti akapa Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga, kuti munhu wose anotenda maari arege kuparadzwa asi ave noupenyu husingaperi.” (Johani 3:16) Saka ari muJerusarema kudai, pashure pemwedzi mitanhatu kubvira paakatanga ushumiri hwake, Jesu anobudisa pachena kuti ndiye achaita kuti vanhu vaponeswe.
Jesu anoudza Nikodhimo kuti: “Mwari haana kutumira Mwanakomana wake munyika kuti atonge nyika.” Izvi zvinoreva kuti akanga asina kutumwa kuti atongere vanhu vose kuparadzwa. Asi sezvaakataura, Jesu akanga atumwa “kuti nyika iponeswe naye.”—Johani 3:17.
Nikodhimo auya kuna Jesu murima nekutya. Sezvineiwo Jesu anobva ataurawo nezverima paanopedzisa nhaurirano yavo achiti: “Zvino kutongwa kunobva pachinhu ichi, kuti chiedza [icho chiri kureva Jesu nemararamiro ake uye nedzidziso dzake] chakauya munyika asi vanhu vakada rima panzvimbo pechiedza, nokuti mabasa avo akanga akaipa. Nokuti uya ane tsika yokuita zvakaipa anovenga chiedza uye haauyi kuchiedza, kuti mabasa ake arege kutsiurwa. Asi uya anoita zvinhu zvechokwadi anouya kuchiedza, kuti mabasa ake aiswe pachena seakaitwa maererano naMwari.”—Johani 3:19-21.
Saka zvasarira muFarisi uyu uyo ari zvekare mudzidzisi muIsraeri, Nikodhimo, kuti afungisise zvaachangoudzwa nezvebasa raJesu muchinangwa chaMwari.
Chii chinoita kuti Nikodhimo ashanyire Jesu, uye sei achiuya usiku?
Sei zvinganzi Jesu haana kuuya ‘kuzotonga nyika’?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Anodzidzisa Nikodhimo Usiku